मातृका यादवले केपी ओलीको मानसिक अवस्था । ठिक छैन भनेपछि एमालेमा खैलाबैला – Nepal Online Khabar
साउन २८, २०७८ बिहिबार 228
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका प्रसाद यादवले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मानसिक र भौतिक अवस्था ठिक नभएको बताएपछि एमाले उनीसँग रु’ष्ट भएको छ।
ओलीले बारम्बार यो सरकार जनादेशबाट नभएर परमादेशबाट बनेको दोहोर्याउँदै आएका छन्। यो भनाइप्रति अ’सन्तुष्ट यादवले प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै ओलीको मानसिक अवस्थाबारे प्रश्न गरेका हुन्। उनले पार्टी एक हुँदाको दिन सम्झना गर्दै भने,‘मैले एउटै पार्टी नेकपा हुँदा भनेको थिएँ केपी शर्मा ओली मानसिक र भौतिक रुपमा ठिक हुनुहुन्न, कुनै बेला दु’र्घटना हुन सक्छ।’
उनले ओलीकै कारण लगभग दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार ढलेको र गठबन्धनको सरकार बनेको बताए। उनी भन्छन्,‘जसले संसद वि’घटन गरे उही आएर बोल्छन् सानले फेरि। सुगा रटान जस्तो परमादेश परमादेश परमादेश। जसको दिमाग बिग्रिएको छ, उसले भन्छ परमादेश, सबैको त बिग्रिएको छैन नि।
ओलीबारे यादवले आपत्तिजनक टिप्पणी गरेपछि एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नियमापत्ति गरेका थिए। उनले कसैको स्वास्थ्यबारे संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्ता आ’पत्तिजनक टिप्पणी हुनु शोभनीय नभएको बताएका थिए। भट्टराईले यादवको अभिव्यक्तिको उक्त अंश संसदको रेकर्डबाट हटाउन पनि माग गरे।
Prevआमाको अस्पतालको बिल तिर्न ओलम्पिकको स्वर्ण पदक !
Nextदेशै भरि ‘ तपाईंको मास्क खोइ?’ अभियान संचालन , एकैदिन ६५ हजारले पाए मास्क ।
हाइटीमा भू’कम्प : ३०४ व्यक्तिको मृ’त्यु, एक हजार ८०० घा’इते !
झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा जारी आठौं नगरसभा स्थगित